စိတ်ထိခိုက်​ပြီးဝမ်းနည်းစရာ ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ကျလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ မျက်ရည်တွေကို ချုပ်ထိန်းပြီး ဟန်မပျက်ဈေးဆက်ေ​ရာင်းပေးနေခဲ့ရှာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး (ရုပ်​သံဖိုင်​) – Maythadin
စိတ်ထိခိုက်​ပြီးဝမ်းနည်းစရာ ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ကျလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ မျက်ရည်တွေကို ချုပ်ထိန်းပြီး ဟန်မပျက်ဈေးဆက်ေ​ရာင်းပေးနေခဲ့ရှာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး (ရုပ်​သံဖိုင်​)
May Thadin | October 24, 2020 | Celebrity, News | No Comments
တစ်နိုင်ငံလုံးက လူကြီး၊ လူငယ်ပရိသတ်မရွေး ချစ်ခင်ကြတဲ့ မင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ပရိသတ်နဲ့ ခဏတာ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးနော် လက်ရှိမှာတော့သူမရဲ့ဘုရင်မသရဖူကို
ပြန်လည်ဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ Live လွှင့်ဈေးရောင်းပေးရင်း ထက်ထက်မှ ထက်ထက်ရယ်လို့ ဖြစ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ချိုသာတဲ့အပြုံး၊ ချစ်စဖွယ် အမူအယာလေးတွေနဲ့
ဖမ်းစားနိုင်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် စိတ်ထိခိုက် ဝမ်းနည်းစရာတွေရှိရင် ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးက ဒီကနေ့မှာတော့ စိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းစရာ
ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ကျလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ မျက်ရည်တွေကို ချုပ်ထိန်းပြီး ဈေးရောင်းပေးနေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထက်ထက်ကတော့ သူမရဲ့ မျက်ရည်တွေကို ချုပ်ထိန်းပြီးဟန်မပျက်အလုပ်လုပ်ပြနေခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေသိပြီး
အားပေးစကားတွေ ပြောပေးခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထက်ထက်ကတော့ သူမရဲ့ဘဝမှာ အောင်မြင်မှု၊ ကျော်ကြားမှုတွေထက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုသာ ရရှိပိုင်ဆိုင်လိုကြောင်း တဖွဖွပြောတတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထက်ထက်ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေက အများကြီးရှိတာမို့ ထက်ထက်တစ်ယောက် စိတ်ဓာတ်မကျပဲ အရင်အတိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိပါစေနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရက်​ဒစ်​
တဈနိုငျငံလုံးက လူကွီး၊ လူငယျပရိသတျမရှေး ခဈြခငျကွတဲ့ မငျးသမီးခြော ထကျထကျမိုးဦးကတော့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ ပရိသတျနဲ့ ခဏတာ အဆကျအသှယျပွတျတောကျသှားခဲ့ပွီးနျော လကျရှိမှာတော့သူမရဲ့ဘုရငျမသရဖူကို
ပွနျလညျဆောငျးနိုငျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ အှနျလိုငျးမှာ Live လှငျ့ဈေးရောငျးပေးရငျး ထကျထကျမှ ထကျထကျရယျလို့ ဖွဈနတေဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ထကျထကျမိုးဦးကတော့ ခြိုသာတဲ့အပွုံး၊ ခဈြစဖှယျ အမူအယာလေးတှနေဲ့
ဖမျးစားနိုငျနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျ။ တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ စိတျထိခိုကျ ဝမျးနညျးစရာတှရှေိရငျ ဟနျမဆောငျတတျတဲ့ ထကျထကျမိုးဦးက ဒီကနမှေ့ာတော့ စိတျထိခိုကျဝမျးနညျးစရာ
ကိစ်စတဈခုကွောငျ့ ကလြုနီးပါးဖွဈနတေဲ့ မကျြရညျတှကေို ခြုပျထိနျးပွီး ဈေးရောငျးပေးနခေဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။ ထကျထကျကတော့ သူမရဲ့ မကျြရညျတှကေို ခြုပျထိနျးပွီးဟနျမပကျြအလုပျလုပျပွနခေဲ့ပမေယျ့ ပရိသတျတှသေိပွီး
အားပေးစကားတှေ ပွောပေးခဲ့ကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ထကျထကျကတော့ သူမရဲ့ဘဝမှာ အောငျမွငျမှု၊ ကြျောကွားမှုတှထေကျ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေိုသာ ရရှိပိုငျဆိုငျလိုကွောငျး တဖှဖှပွောတတျသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ထကျထကျကို ခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေ အမြားကွီးရှိတာမို့ ထကျထကျတဈယောကျ စိတျဓာတျမကပြဲ အရငျအတိုငျး ပြျောပြျောရှငျရှငျရှိပါစနေျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ ခရကျဒဈ
မော်လမြိုင်မှ ?? နှစ်သမီး ?? ကိစ္စ ပန်ဆယ်လိုပြောပြီ
ထိုင်းဘုရင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်လျော့ပေါ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ တသက်တကျွန်းကျခံနေရ​သော မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးဖြစ်​တဲ့ ဝင်းနဲ့​ဇော်​ (ရုပ်သံ)
အွန်လိုင်းစာမျက်နှာေ​ပ်ါမှာ ငွေအတုရောင်းသည် ဆို​သောသူတွေကို ဖမ်းလိုက်ပြီ
သူ​နေထိုင်​​သော ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ပြည်သူများအတွက် Mask နဲ့ ပိုးသတ်ဆေးများကို ဝေငှလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး လွင်မိုး
စိတျပငျပနျးမှုနဲ့ အခကျအခဲတှရှေိပမေယျ့ ကောငျးမှုကုသိုလျတှလေုပျပွီး ပွညျသူတှအေတှကျ ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့သပေးနတေဲ့ ဘဘေီမောငျ
သကျကွီးရှယျအို အဘိုးအဘှားမြားအခကျအခဲတှအေဆငျပွစေရေနျ တတျနိုငျ သလောကျ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
လကျရှိအခွအေနမှော ခတ်ေတခဏတိမျးရှောငျနရေတာကွောငျ့ စိတျပူပေးနကွေတဲ့အတှကျ သူရဲ့လကျရှိအခွအေနကေိုပွောပွလာခဲ့တဲ့ ညီထှဋျခေါငျ
သရုပျဆောငျမျောဒယျ ပိုငျတံခှနျကို စဈကား ၈ စီးဖွငျ့ ဖမျးဆီးချေါဆောငျ
Maythadin is Myanmar’s favourite news, entertainment, lifestyle website. We provide you with the latest breaking news stories everyday.
Articles are displayed in text, video and photo. Visitors can read news in articles type of categories in http://maythadin.website (example – News, Knowledge, Sport, Health, Celebrities and Lifestyle….etc).
ဆမလကျမှတျသာ သိမျးလို့ရမယျ ရငျထဲက ယုံကွညျခကျြကို ဘယျသောအခါမှ သိမျးလို့မရပါဘူးတဲ့ဗြာ
© 2021 Maythadin.